डिप्रेसन कसरी हुन्छ ? यस्ता छन् लक्षण र रोकथामका उपाय — Imandarmedia.com
काठमाडैँ । जुनसुकै सम्बन्ध पनि एउटा विश्वासमा बनाइन्छ, जब शंका वा दुराचार बीचमा आउँछ, यसले सम्बन्धलाई टुक्राटुक्रा पार्न समय लिँदैन । यस परिवर्तित युगमा जति सजिलै सम्बन्धहरू निर्माण हुन्छन्, त्यति नै चाँडो तिनीहरू टुक्रिन्छन् पनि । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धमा आउने फाटोले दम्पतीहरूमा डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ ।
आजकल धेरैजसो युवापुस्ता यस अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्न असमर्थ र गतिमा राख्न सक्षम नहुनु सम्बन्धविच्छेदको प्रमुख कारण हो । यस्तो अवस्थामा युवापुस्ता जोसम्बन्ध जोगाउनको लागि संघर्ष गर्दैछन् उनीहरुले यसबाट बच्नका लागि केही तरिकाहरू अपनाउन सक्छन् ।
सम्बन्ध उदासीनताको कारण ? सम्बन्धमा उदासीनता र सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आजको जीवनशैली यसको प्रमुख कारण हुन सक्छ । यो किनभने आज धेरै मानिसहरू यति व्यस्त छन् कि तिनीहरू एक अर्कालाई समय दिन असमर्थ हुने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै दम्पतीहरू बीचको दुरी बढ्न सक्छ । जसले अन्ततः सम्बन्धमा फाटो ल्याउन सक्छ । किनभने सफल सम्बन्धको लागि एक अर्कालाई उचित समय दिनु महत्वपूर्ण छ ।
यदि यो सम्भव छैन भने कमसेकम केही समयसँगै बिताउनुहोस् । यसले दम्पतीहरू बीच नकारात्मक भावनाहरू हटाउन मद्दत गर्छ । जोडीबीचको दुरी वा सम्बन्धबिच्छेदले जोकोहीलाई पनि एक्लो महसुस गराउनाका साथै यसले एकांकीपन वा डिप्रेसन पनि निम्त्याउन सकिन्छ ।
सम्बन्धमा डिप्रेसनको प्रभाव ? डिप्रेसनले मान्छेको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्नेगर्छ । सम्बन्धमा उदासीनताको प्रभाव निम्नानुसारको हुन्छ ।
साथै, यदि तपाईं सम्बन्धमा उदासीनताबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने तपाईंले साथीहरू बनाउने प्रयास गर्नुभयो र उनीहरूसँग आफ्नो खुशी र दुः ख बाँड्न सिक्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईंको तनाव कम हुनेछ । राम्रो र मीठो क्षणहरू सम्झनुहोस् जसले तपाईंलाई खुसी बनाउँछ । जस्तै, हाँसो ठट्टा वा साथीहरूसँगको अविस्मरणीय क्षण आदि ।